Somalia & qorshaha ay la tagtay shirka Shidaalka Afrika?! | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Somalia & qorshaha ay la tagtay shirka Shidaalka Afrika?!
Somalia & qorshaha ay la tagtay shirka Shidaalka Afrika?!
(Dubai) 11 Nof 2021 – Iyadoo maanta lagu wado in magaalda Dubai ee waddanka Imaaraatka Carabta lagu soo gebagabeeyo shirweynaha Todobaadka Shidaalka Afrika, ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay halkaas ku soo bandhigtay xogtii ugu dambaysay ee shidaalka la sheegay inuu ku jiro dalka.
Shirka Toddobaadka Shidaalka Afrika oo caadiyan lagu qabto waddanka Koonfur Afrika ayaa sannadkan loo wareejiyay magaalada Dubai, halkaas oo ay isugu tageen saraakiisha shidaalka ee dalalka Afrika, khubarada ku xeelka dheer arrimaha shidaalka iyo shirkadaha shidaalka soo saara. Taas oo sababtu tahay Karoona awgii.
Wefti ka socota Soomaaliya ayaa shirkaas qayb ka ah, kaas oo soo bilawday isniintii.
Soomaaliya maxay la tagtay shirkaas?
Shirkan ayaa lagu soo bandhigaa khayraadka shidaal ee dalkaas kastaa haysto iyo qorshaha uu ka leeyahay.
Soomaaliya illaa iyo kontomaadkii ayaa la baadhaayey shidaalka ceegaaga dhulkeeda, weli se laguma guulaysan in la soo saaro.
Tiro shirkado ah oo kala duwan ayaa qayb ka ahaa baahistaas, sida oo kalena dawlado xiisaynayey in ay soo saaraan ayaa dhawr jeer soo muuqday, balse marna ma aysan hirgelin.
Maxamed Xaashi Cabdi Carrabey, Agaasimaha Guud ee wasaaradda Batroolka ee Soomaaliya, oo shirkaas ka qeybqaadanaya ayaa BBC-da u sheegay in ay soo bandhigeeyeen sharciyada iyo habka loo maalgashan karo.
“Waxaan soo bandhigaynay sidii looga faa’iidaysan lahaa shidaalka soomaaliya oo aanu u soo bandhigaynay Dalalka kale ee Afrikaanka ah,” ayuu yidhi Carrabey.
Madaxda ka qeybgaleysa shirkaas ayaa horey loogu eedaynayey in ay gelayaan heshiis, iyada oo aan lala ogayn. Waxaana agaasime Carrabey sheegay in aanay taas meesha u joogin, warkaas aanu waxba ka jirin.
“Haba yaraatee halkan umaannu iman in aannu heshiis ku soo galno, awoodna uma lihin, keliya soo bandhid uun bay ahayd oo dadkii daawanayey iyo dadki na dhegaysanayay ay soo dhaweeyaan arrintaa iyada ah.” ayu raaciyey hadalkiisa agaasimuhu.
Dhanka kale, shalay ayuun bay ahayd markii Maamul-goboleedka Puntland ay sheegeen in Dowladda Federaalka aysan heshiisyo shidaal la geli karin shirkado shisheeye, xilli uu socday shirka Toddobaadka Shidaalka Afrika magaalada Dubai.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Puntland ayaa lagu sheegay in Dowladda Federaalka aysan u furneyn saxiixitaanka heshiisyo caalami ah.
Waxaa intaas lagu daray inaysan jirin shuruuc la isku waafaqay oo qeybsiga kheyraadka ah oo ka dhaxeeya Dowladda Federaalka iyo maamulkaas.
Khilaaf ba’an ayaa ka taagan shidaalka Soomaaliya waxaana uu la xidhiidhaa dhanka shuruucda, qaybsiga iyo cidda awood u leh in ay gasho heshiisyo caalami ah.
Sannadkan horraantiisii Guddiga Kheyraadka Dabiiciga iyo Bii’ada ee Golaha Shacabka Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saareen shaaca uga qaaday khilaaf xooggan oo u dhaxeeya iyaga iyo wasaaradda Batroolka ee xukuumadda Federaalka.
Previous articleDUSIN: Laacibka ku guulaystey Abaalmarinta Ballon d’Or 2021 oo lasoo bandhigay!!
Next article“Summadda 8/17 ee ku dheggan gantaalaha Turkigu sameeyo waxay u taagan tahay aayad Qur’aan ah!” – Waa tee?!